🥇 ▷ Android 10 beta ee Samsung Galaxy Goorma ayey imaan doontaa? ✅
Android 10 beta ee Samsung Galaxy Goorma ayey imaan doontaa?
Tan iyo markii si rasmi ah loo soosaaray Android 10 iyo wararka ku saabsan astaanta koowaad ee la cusbooneysiinayo, Adigu wax naga weydiisan mayno taariikhda casriyeynta taleefankaaga.. Hagaag, dhammaan macluumaadka aan hayno, waad ka heli kartaa qodobka aan uga tagno taleefannada oo dhan oo lagu cusbooneysiin doono Android 10. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kugu wargalinno markii cusboonaysiinta loogu talagalay Android 10 ee astaan ​​kasta oo la bilaabay, iyo Tani waa kiiska Samsung.
Waxaan horey kuugu sheegnay, tusaale ahaan, imaatinka nooca beta ee Android 10 ee OnePlus 7, marka lagu daro qaababka ay tahay in la raaco si loogu rakibo taleefankaaga. Hagaag hadda waa marki Samsung, maxaa yeelay bulshada Sammobile waxay heleen macluumaad gaar ah oo ku saabsan nooca beta ee nooca ugu dambeeyay ee Android ee Samsung Galaxy S10 iyo Note 10.
Android 10 beta Samsung ayaa la shaacin doonaa kahor dhamaadka bisha
Waxaa laga yaabaa inaadan xiiseyneynin inaad ku rakibatto nooca beta ee noocaan ah Android qalabkaaga, laakiin waa inaad ogaataa inay aad muhiim u tahay inaad hesho nooca xasilloon oo ka xor ah guuldarrooyinka (ama ugu yaraan inta ugu yar ee suuragalka ah). Tan darteed, waa wax iska caadi ah in noocyada kala duwan ay weydiistaan ​​caawimaad ka timaada bulshada adeegsigooda, maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo doonaya inay isku dayaan noocaan ah software-ka, in kasta oo ay u badan tahay inay la kulmaan khaladaad. Hagaag, haddii foornada Sammobile ay ku guul darreysato, Samsung ayaa ku dhawaaqi doonta nooca beta ee Android loogu talagalay Galaxy S10 iyo Note 10 dhamaadka bishaan.
Sebtembar waxaa ka buuxa waxyaabo la yaab leh iyo soo-bandhigyo astaan ​​ah, taasi waa hubaal, sababta oo ah waxaa jira dhowr bandhig oo bishan ah. Si kastaba ha noqotee, Samsung waxay dooneysaa inay ka faa’iideysato taas si ay ugu dhawaaqdo nooca beta ee Android 10 Samsung. Galaxy Note 10 iyo S10. Hadaad aragto taarikhda calaamaduhu ay kujiraan cusboonaysiinta sanadkii hore, nooca beta ayaa lasii daayay inta lagu jiray Bishii Nofembar ilaa Galaxy S9 mana aheyn illaa Disembar in nooca xasilloonida uu bilaabay inuu yimaado.
Haddii Samsung ay ugu dambeyntii ku dhawaaqdo nooca beta beta dhamaadka bisha Sebtembar, adeegsadayaasha xitaa way iska qori karaan horaantii, taas oo markaasi noqon doonta calaamad bilowga noocii hore ee beta, iyo sidaas isku mid wixii ku saabsan cusbooneysiinta xasilloonida. Wali wax kama ogin oo ku saabsan moodooyinka kale ee Samsung, laakiin haddii aan eegno wixii dhacay sanadkii hore, taasi waa Galaxy S9 iyo Note 9 waxaa laga yaabaa inay helaan nooca beta inta lagu jiro bisha Juun, laakiin taasi way kugu soo ogeysiin doontaa waqti ka waqti.